Disaster preparedness Archives - Green Energy Zim
Plans underway to strengthen Zimbabwe’s civil protection unit
By Wallace Mawire The government of Zimbabwe through the Ministry of Local Government and Public Works has initiated countrywide stakeholder consultations on the disaster risk management bill which seeks to repeal the country’s Civil Protection Act. The consultations come in the wake of concerns raised by various sectors in the country on the need to […]
Posted in: Local, NewsTagged: Disaster preparednessLeave a commentChido Luciasi	 March 15, 2020
Zim adopts mapping technology to predict disasters
By Wallace Mawire After Cyclone Idai ravaged southern Africa, killing at least 1,000 people, Zimbabwe’s scientific community is actively using geospatial mapping technology to better predict future disasters. The cyclone hit southern African countries include Mozambique, Malawi and Zimbabwe. In Zimbabwe, at least 268 people were killed and many are still missing. Local scientists […]
Posted in: Local, NewsTagged: Climate Change, Cyclone Idai, Disaster preparedness, Water and Climate ChangeLeave a commentChido Luciasi	 January 31, 2020
Need to review Zim disaster response, preparedness
Following a series of events in Zimbabwe, it is clear that the effects of climate change are visiting the southern African country with anger. One can safely say nature is angry with Zimbabwe. The effects of climate change are felt almost every day in the country, with climate change defined as any significant changes in […]
Posted in: Local, OpinionTagged: Climate Change, Cyclone Idai, Disaster preparednessLeave a commentMISA Zimbabwe	 April 11, 2019